एउटै भालेको तौल चौध किलो ! | Kendrabindu Nepal Online News
एउटै भालेको तौल चौध किलो !
१० माघ २०७६, शुक्रबार १८:१९
गत असोज ११ गते ‘अर्पणा पोल्ट्री फार्म’मा आएदेखि यसको आयु र तौलको गन्ती शुरु भयो । डेढ महिना अघि १२ किलो २०० ग्राम रहेको भाले अहिले बढेर १४ किलो पुगेको छ । दैनिक ५० ग्रामका दरले बढिरहेको भालेको तौल १६ किलोसम्म पुग्ने आँकलन कुखुरा पालकको छ ।
“यो भाले परीक्षणका लागि लामो समय पालिएको हो”, फार्मका सञ्चालक विजय शर्माले भने, “अब यो धेरै समय यहाँ रहँदैन होला ।” ‘ब्रोइलर’ कुखुराको आयु र तौलबारे अनुभव लिन नबेची राखिएको उनको भनाइ छ । उक्त भालेले अहिलेसम्म ६ किलोभन्दा बढी दाना खाइसकेको छ । उचित हेरचाहले भाले निरोगी छ ।
“भाले किन्नका लागि धेरैले सोधिरहनु भएको छ, वनभोज जाने या त्यस्तै समूह आए बेच्ने तयारीमा छु”, शर्माले भने । उक्त भालेलाई अहिले बेच्दा बजार मूल्य तीन हजार २०० पर्छ । बागलुङ नगरपालिका–३ रातामाटास्थित ‘फार्म’मा पुग्ने जो कोही दङ्ग मानेर भाले हेर्छन् । कतिले उचाल्छन् पनि । भालेसँगै हुर्किएका दुई पोथी पनि छन्, जसको तौल आठ किलो पुगेको छ ।
शर्मा वि.सं. २०६१ देखि कुखुरापालन व्यवसायमा छन् । घर व्यवहारदेखि, बालबच्चाको पढाइसम्म सोही व्यवसायबाट धानिएको छ । ‘फार्म’मा अहिले एक हजार कुखुरा छन् । उनलाई व्यवसायमा श्रीमती गीताको दरिलो साथ छ ।
“१६ वर्ष भयो कुखुरापालनमा लागेको, ४५ हजारबाट शुरु गरेको लगानी अहिले १२ लाख बढी पुगेको छ”, गीताले भनिन् । शुरुमा घरकै सानो कोठाबाट शर्मा दम्पतीले कुखुरापालन व्यवसाय शुरु गर्नुरेका थिए। अहिले आधुनिक खोर बनाएर कुखुरापालन गरिरहेका छन् । वर्षमा छ ‘लट’ कुखुरा तयार हुन्छन् ।
एक पटकमा झण्डै ६० देखि ७० हजारसम्म मुनाफा निस्कन्छ । बजार मूल्यमा आउने उतारचढावले कहिलेकाहीँ आम्दानी घटबढ हुन्छ । अहिले जिउँदो ‘ब्रोइलर’ कुखुरा प्रतिकिलो २३० मा बिक्री भइरहेको छ । कुखुरापालनसँगै शर्मा दम्पतीको मासु, किराना र खाजा पसल पनि छ ।
‘फ्रेस हाउस’का लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङबाट गत आवमा एक लाख ९४ हजार अनुदान आएको थियो । त्यसमा तीन लाख थपेर मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थित ‘फ्रेस हाउस’ सञ्चालन गरिएको शर्माले बताए । व्यवसायमा शर्मा दम्पतीको लगाव र मेहनत देखेर गाउँले पनि छक्क पर्छन् ।
“विदेशको सपनालाई सधैँका लागि त्यागेर गाउँघरमै बसी केही गर्ने सोचका साथ अघि बढेको छु”, शर्माले भने, “परिवार र छिमेकीको पनि राम्रो साथ छ ।” शर्माले यसअघि रोजगारीका क्रममा तीन वर्ष अरबमा बिताएर फर्किएका हुन् । “अब त मैले पनि विदेश जान दिन्न, यहीँ सुखदुःख गरेर बस्ने हो”, शर्माकी श्रीमती गीताले भनिन्, “ठूलो देश जाने चक्करमा न काम भयो, उल्टै दलालले पैसा खाए ।”
वर्षौंदेखि काम गरे पनि कुखुरापालनमा अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान नपाएको शर्मा दम्पतीको गुनासो छ । कुखुरापालकका लागि अनुदानभन्दा अनुभव आदानप्रदान र तालीम बढी महत्वपूर्ण हुने उनीहरुले बताए ।
एउटै भालेको, तौल चौध किलो !
Prevडेढ लाख घुस लिने खरिदारविरुद्ध मुद्दा दायर
कांग्रेसभित्र सहमति : विस्तृत कार्यतालिका र कार्यविधि बनाउन समितिNext